Wadadii Madaxtooyada u xidhnayd oo maanta la furay | Somaliland.Org
Wadadii Madaxtooyada u xidhnayd oo maanta la furay
December 31, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Waddada badhtamaha Hargaysa ee hormarta xarunta Madaxtooyada Somaliland oo xidhnayd tan iyo markii qaraxyadu ka dhaceen magaalada Hargaysa 29-kii bishii October, 2008, ayaa maanta si rasmi ah loo furay.
Waddadan oo ahayd jid muhiim u ah isu socodka magaalada Hargaysa, ayaa baryahan dambeba aad la isu waydiinayay sababta muddadaa dheer loo xanibay ama loo xidhay, taasi oo muujinaysa cabsi iyo fulaynimo xoog leh oo Madaxtooyadu, iyada oo waddadaasi intii ay xidhnayd la dhigay gawaadhi tikniko ah iyo askar tiro badan, isla markaana wajahadda hore ee dhismaha aqalka Madaxtooyada ayaa lagu xeeray kaabado waawayn oo shub ah, kuwaasi oo ilaa iminka yaala halkaasi.
Furitaanka waddadan ayaa waxa ay ka dambaysay balanqaadyo maalmihii u dambeeyay ka soo baxayey masuuliyiinta xukuumadda qaar ka mid ah oo aan fulin. Taliyaha ciidanka Booliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubad ayaa Axadii u sheegay Radio Hargaysa in waddadaasi la furi doono Isniintii dorraad, taas oo aan fulin. Sidoo kale Maayarka Caasimadda Hargaysa Eng Xuseen Maxamuud Jiciir oo isagu hore u shaaciyey in waddadaasi la furayo toddobaadkan oo ay saxaafaddu wax ka waydiisay xalay, ayaa sheegay in aanu garanayn cidda iyo sababta waddadaasi u xidhan tahay. Hase yeeshee, warar aanu ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in awaamiirtaa Taliyaha Booliska iyo Maayarka caasimadda ee ku wajahan furitaanka waddadaas uu hortaagnaa taliyaha ciidanka ilaalada Madaxtooyada, kaas oo ugu dambayntii maanta ka qaatay ciidamadiisa halkaa. Arrintan ayaa muujinaysa isku xidhnaan la’aan ka dhex jirta masuuliyiinta xukuumadda Madaxwayne Riyaale.
Dhinaca kale dad farabadan oo siyaasiyiin iyo muwaadiniin kaleba leh ayaa xidhitaanka waddadan u arkayay sumcad dilis iyo in xukuumadda maanta talada haysaa ay ilaalintii amaanka qaranka ee laga sugayay ay ka doorbidday in ay xarumaheedii oo qudha ay gaadh ku meeriso, balse shacabkii ay ilawday oo aanay dan ka lahayn, iyada oo haatan ka horna ay xisbiyada mucaaridku ka hadleen xidhitaanka waddadan saaka la furay.
Axmed Maxamed Saleebaan, Somaliland.org, Hargeysa